Kevin De Buryne oo si laab-furnaan ah uga hadlay dareenka uu qalbiga ugu hayo macallinkiisii hore ee Jose Mourinho – Gool FM
Kevin De Buryne oo si laab-furnaan ah uga hadlay dareenka uu qalbiga ugu hayo macallinkiisii hore ee Jose Mourinho
Ahmed Nur November 13, 2021
(Manchester) 13 Nof 2021. Kubbad sameeyaha kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ka hadlay waqtigiisii adkaa ee u ciyaarista naadiga Chelsea, kalsooni darradii uu kala kulmay macallinkiisii hore ee Jose Mourinho iyo go’aanka uu kaga dhaqaaqay Stamford Bridge.
De Bruyne ayaa Blues ka tirsanaa xilli ciyaareedkii 2013/14 isagoo kaliya saddex kulan uga ciyaaray horyaalka Premier League taasoo ku kaliftay inuu qaato go’aan uu kaga tagayo galbeedka magaalada London.
Sida laga soo xigtay Het Nieuwsblad, laacibka Man City ayaa yiri: “waxay doonayeen inay isii heystaan oo ay fursad kale i siiyaan, balse anigaa xaqiiqdii doonayay inaan aado Dortmund.
“Waan ku faraxsanaa middaas, marwalbana dareenkeyga ayaa go’aan ku gaaraa, wax yar ayaan ku ciyaaray Chelsea, balse kulankii Swindon waxa uu ahaa mid aanan la saadaalin.
“Bil ma aanan ciyaarin, waxaadna kahor tageysaa koox League 2 (horyaalka heerka afaraad ee Ingiriiska) ka ciyaarta taas oo kale, markaas sheeko wey isku dhammaatay”.
Ciyaarta uu sheegay De Bruyne waxay Blues kaga hor tagtay naadiga Swindon kulan ka tirsan tartanka Carabao Cup sanadkii 2013, waxaana ciyaartaas uusan Mourinho ku qancin qaab-ciyaareedka xiddiga reer Belgium.
Dhinaca kale, 30-sano jirkan ayaa ka hadlay xiriirka kala dhexeeya macallinka reer Portugal isagoo yiri: “marnaba ma aanan u tagi Jose Mourinho, si adag ayaan u tababaranayay, waxaana soo bandhigay wax ku filan, balse kubadda cagta waxaa ka jira quraafaad ah markaad tababar fiican sameyso inaad fursad heleyso.
“Balse taasi run ma ahan, waana ka quustay waayo fursad aan ku ciyaaro iima muuqan, waxaana doortay inaan si kale u macaamilo.
“Waxay ahayd inaan xaaladdaas ka baxo, waxaana rabay inaan baxo, ma necbi Mourinho, ma ihi cunug yar, kaliya wixii aan rabay ayaanan shaqeyn” ayuu hadalkiisa sii raaciyay xiddiga naadiga Manchester City.
Inkastoo aysan hir-gelin u dhaqaaqistiisii Dortmund, waxa uu bishii January ee 2014, 18 milyan oo gini ugu biiray naadiga VfL Wolfsburg oo uu ka caawiyay inay booska labaad kaga dhammeysato horyaalka Bundesliga, waxaana uu England kusoo laabtay 2016 isagoo ku biiray Man City markaas oo uu noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan khadka dhexe kubadda cagta.
Miyuu Sergio Aguero ka fikirayaa ka fariisashada kubadda cagta kaddib dhibaatadii wadnaha?